Guddoomiyihii hore ee gobolka Sh/dhexe Cabdi Jiinow oo xilka Gudoomiyenimada ku wareejiyay Cali Guudlaawe – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Munaasabad ay xilka ku kala wareegayeen guddoomiyihii hore ee gobolka Sh/dhexe Cabdi Jiinow Calasow iyo guddoomiyaha cusub ee gobolka Sh/dhexe Cali Guudlaawe Xuseen ayaa lagu qabtay maanta magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Sh/dhexe.
Mas’uuliyiintii goobjooga ka ahayd munaasbadan xil wareejinta ah ayaa waxaa ka mid ah mas’uuliyiin ka socotay wasaarada arrimaha gudaha,mas’uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Sh/dhexe, guddoomiyaasha degmooyinka Jowhar, Balcad iyo Mahaday,saraakiil ka tirsan ciidamada xoogga dalka iyo ciidamada Booliska gobolka Sh/dhexe heer gobol iyo heer degmo,oday dhaqameedyo iyo qeybaha kala duwan ee bulshada gobolka Sh/dhexe.
Guddoomiyihii hore ee gobolka Sh/dhexe Cabdi Jiinow Calasow oo hadal gaaban ka jeediyay munaasabadan ayaa sheegay in uu ku faraxsan yahay in uu xilka wareejiyo. “Mudadii aan xilka hayay waxaa gobolka Sh/dhexe soo maray dhibaatooyin isugu jira kuwo dabiici ah iyo kuwo dadku ay sameeyeen waxaan ugaga soo gudubnay iskaashi ay sameeyeen maamulka iyo shacabka gobolka.”ayuu yiri Cabdi Jiinow Calasow. Guddoomiyihii gobolka Sh/dhexe
Cabdi Jiinow Calasow ayaa carabka ku dhuftay in mashaariic badan laga hirgeliyay gobolka taasna ay sabab u ahayd ammaanka ka jiray gobolka isagoo ka xusay degmooyinka Balcad iyo Jowhar. Guddoomiyaha gobolka Sh/dhexe ee xilka la wareegay maanta Cali Guudlaawe Xuseen ayaa ballanqaaday in uu ka shaqeyn doono sidii cadaalad ay u heli lahaayeen dadka ku nool gobolka Sh/dhexe iyo sidii shacabka gobolka u gaari lahaayeen horumar.
Waxaan ka shaqeyn doonaa sidii looga hortagi lahaa in dagaal beeleedyo ay ku soo laabtaan gobolka iyo weliba sidii horumar looga gaari lahaa guud ahaan ammaanka gobolka Sh/dhexe,”ayuu yiri Cali Guudlaawe oo ah guddoomiyaha cusub ee gobolka Sh/dhexe. Munaasabadan ayaa sidoo kale waxaa ka hadlay agaasimaha guud ee Wasaarada Arrimaha Gudaha ee Dowlada Federalka Soomaaliya Cali Siciid Xalane ayaa ugu baaqay shacabka gobolka Sh/dhexe inay soo dhoweeyaan ayna la shaqeeyaan guddoomiyaha cusub ee loo soo magacaabay gobolka Sh/dhexe.
← The Middle East’s Three Timelines → Daawo booqashadii R W Cabdi Weli ku tegay xeryaha qaxootiga Dhadhaab